फिरंगिहरुको बढ्दो प्रभाव
बिहिवार, असार ३, २०७८ ०७:५५:०१ युनिकोड
शनिवार, जेठ १५, २०७८ बालाराम उपाध्याय
वि सं. १८६० दशकमा काजी दामोदर पाँडेले एउटा विशेष परिवेशमा फरक प्रसंगमा प्रयोग गरेको शब्द हो फिरंगी, इस्टइन्डियन कम्पनीका प्रतिनिधि हाम्रा सत्रु हुन्। यिनिहरुबाट सजग सचेत हुनु पर्छ भनेर अंग्रेजहरुलाई संकेत गर्दै भन्नु भएको कुरा। “अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्ने–बाबुराम आचार्यको किताबमा पढ्न पाईयो।
त्यति मात्रै हैन १९२१ मा भारतीय चर्चित फिल्मकार राजु डिङ्ग्राले पनि अंग्रेजहरुले भारतमा पारेको प्रभावहरुको उल्लेख गरेर फिरंगी नामको फिल्म बनाउनु भएको रहेछ। मैले यो शब्दको प्रयोग किन गरेको त भने, हामी नेपालीले प्रायः भन्ने गर्छौ नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो यिनिहरुको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थाल्यो। यी यसरी हस्तक्षेप गर्ने, दवाव दिने को हुन् त? यस्तो कहिले देखि गर्न थालेको होलान्? यी र यस्तै विषयमा अध्ययनको क्रममा मेरो अध्ययन र बुझाईबाट प्रष्ट के कुरामा छु त भन्दा इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा अनेकौं यस्तो हस्तक्षेप र दवाव तत्कालीन हाम्रो नेतृत्वले भोग्नु भएकै हो।
साम्राज्यवाद र विस्तारवादका नाममा यस्ता प्रकारका हस्तक्षेपकारी र दमनकारीहरुलाई लेखकले फिरंगी भन्ने सब्दले सम्बोधन गर्नु भएको होला। यी र यस्ता प्रकारका फिरंगिहरुले जतिसुकै दबाब दिए पनि दमन र हस्तक्षेप गर्न खोजे पनि नेपाली वीर पुर्खाहरुको बिरताबाट संरक्षित र शासित मुलुक हो। आधुनिक नेपाल निर्माण देखि विभिन्न समयमा अनेकौं प्रकारका आरोह अवरोह पार गर्दै अनेकौं चुनौतीको डटेर सामना नगरेको भए सायदै हामी यो अवस्थामा हुने पो थिएनौ कि?
जुनकुरा हामी स्वाभिमानी नेपाली हरुले बिर्सिने कुरै भएन। शिर्षक नै फिरंगी भए पछि विषय वस्तुको उठान र विसान यसै भित्र खोज्ने प्रयास गरेको छु। काजी कालू पाँडे र भारतीय फिल्मकारले यो शब्द किन प्रयोग गरेको रहेछन्, भनेर गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ कि ती फिरंगिहरुले हामीलाई मात्रै हैन भारतीयहरुलाई पनि दुःख दिएको देखिन्छ। मैले पनि उहाँहरु (कालू पाँडे र राजु डिंग्रा) बाट शब्द सापटी लिएर त्यही शब्द प्रयोग गर्न रुचि राखे। यी फिरंगी भेषधारीहरुले उहिल्यै देखि दुःख दिदै आए र आज सम्म पनि अनेकौं रुप रंग वा भेषमा हस्तक्षेप गरि रहेका छन्।
यी कहिल्यै NGO/INGO को नाममा कहिल्यै जात धर्मको नाममा त कहिल्यै विविध प्रकारको अनुदान र सहयोगको नाममा देशको कुना कन्दरासम्म पुगेर हाम्रो हैन आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दैछन्। हाम्रा पुर्खाहरुको साहसिक र सुझवुझपूर्ण शासन शैलीबाट हामी कसैको उपनिवेश हिजो देखि आजसम्म बनेनौ। र भोलि पनि बन्ने छैनौ। तर यी र यस्ता विविध भेष धारी फिरंगीहरुलाई समयमै चिन्न नसक्नु र चिनेर पनि यिनका गतिविधि लाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु हाम्रो नेतृत्व चुकेको देखिन्छ।
हामीलाई भोकले मर्न पनि नदिने र उच्च विकसित देश हुन पनि नदिने, देखि नेपालको सामरिक भू–राजनीतिको फाइदा उठाउदै संसार को पहिलो शक्तिशाली देशको दाबी गरिएको संसारको दोस्रो शक्तिशाली देश चीन र संसारको छैटौं शक्तिशाली देश भारतका गतिविधि नजिकैबाट नियाल्न पाइयोस् जसले थप गतिविधि गर्न मात्रै नभई भारतमा पस्चिमाहरुको प्रभाव पार्न सकियोस् चीनको प्रभाव नेपालमा नपरोस् जस्ता उद्देश्यबाट यी फिरंगिहरुको नेपाल यात्रा जारी छ। डा. युवराज संग्रौलाको South Asia China Geo Economic भन्ने पुस्तकको आधारमा २०४६/४७ को परिवर्तनसम्म आई पुग्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १६ प्रतिशत थियो।
जब २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। यो सरकारले केही गर्छ भन्ने। यो कुरा कसैले चाल पाएर यस सरकारलाई अलोक प्रिय बनाउनु पर्छ भन्ने अनेकौं खेल खेले। नवउदारवादको नाममा नेपालमा रहेका उधोग कलकारखानाहरु जस्तैः बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, बिराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, बिरगंज औद्योगिक क्षेत्र लगाएत ६ सय भन्दा बढी साना ठुला उधोगहरुलाई खतम गरियो।
डा. संग्रौलाकै अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित पेल्टिङ्ग सेट र वाटर पम्पहरु सिक्किममा बिक्रि हुँदा रहेछन् भने बिरगंज औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित कृषि औजारहरु, हलाहरु भारतको बिहार लगाएतका स्थानमा बिक्रि हुँदा रहेछन्। नेपालमा उत्पादन हुने गलैंचा चिया लगाएत थुप्रो वस्तुहरु भारत लगाएत तेस्रो मुलुकमा पनि हाम्रो उत्पादित वस्तु निर्यात हुने गरेको रहेछ। यी उद्योगहरुसंगै नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटाईयो पाँच बर्षको लागि चुनिएको बहुमतको सरकारले पूरा कार्यकाल बिताउन सकेन देशमा मध्यावधि चुनाव गरियो। चुनावमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो।
यसले अत्यन्तै लोकप्रीय कार्यक्रम ल्यायो र जनतामाझ स्थापित हुने छनक देखाई सके पछि एमालेको संगठन छिन्नभिन्न पार्न र जनताबाट टाढा बनाउन यस पार्टीलाई NGO/INGO भारी बोकाईयो। डा. संग्रौला लेख्नु हुन्छ–२०५१ सालसम्म १२/१३ हजार NGO/INGO काम गर्थे भने एमालेको नौ महिने सरकार मा ४३/४४ हजार NGO/INGO पुगे छन्। श्रमजीवी सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गरि पिछडिएको जाती क्षेत्र वर्ग समुदायको अधिकारको निम्ति माओवादीले २०५२ सालबाट शुरू गरेको जनयुद्धले जनताको मन जित्दै सफलता हासिल गर्दै थियो, त्यही मौका छोपी धर्म सस्कृती र सस्कृत शिक्षाको विरुद्धमा सामेल गराईयो। त्रिभुवन विश्व विद्यालय जस्तो संसारकै ख्याति प्राप्त संस्थालाई उपनिवेश बनाईयो। नेपालमा कलेज टप गर्ने तिक्ष्ण बुद्धि भएका विद्यार्थिहरुलाई विभिन्न बाहानामा विदेश लैजाने नीति योजना बनाईयो। जसले गर्दा नेपालको दक्ष जनशक्ति पलाएन हुने क्रम जारी छ।
नेपाली भाष माथि आक्रमण गर्न खोजियो। त्यति मात्रै हैन मधेसवादी दलहरुलाई एक मधेस एक प्रदेशको आन्दोलन गर्न लगाईयो। यी र यस्ता जातीय भौगोलिक अनेक प्रकारको द्वन्द र आन्दोलनको सृजना गराईयो। यसरी देश र जनताको हितमा काम गर्न चाहने लामो राजनीतिक यात्राबाट आएका नेताहरुलाई पाखा लगाईयो। अवसरवादी र यी फिरंगिहरुसंग उठ बस भएका आफूलाई पठिट भनाउदाहरु पार्टीको हरेक संरचनामा अगाडि आए। कर्मचारी देखि राज्यको विभिन्न अंगहरुको तालिम संचालन तथा निति नियम बनाउने र योजना निर्माण गर्ने सम्मको कार्यमा समेत यिनिहरुको प्रवेश भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसलाई नवउदारवादको भारी बोकाएर उधोग धन्दा र कलकारखाना ध्वस्तै पारियो।
एमालेलाई NGO/INGO को भारी बोकाईयो माओवादीलाई धर्म संस्कृति र संस्कृत शिक्षाको विरुद्ध प्रयोग गरियो। त्यसै गरि आदिवासी जनजाती र मधेसीलाई अनेकन भारी बोक्न लगाईयो। जानी या न जानी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ले यी यस्ता प्रकारका योजनाहरुको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो। हाम्रो नेतृत्व को समयमै यस्ता कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सदियौँ देखिका झांगिएका यिनिहरुका जराहरु पत्ता लगाई यिनको बढ्दो प्रभावलाई अनिवार्य घटाउनु पर्छ। यिनिहरुले पैँसाको खोलो बगाए पनि नेपालको विकास हुनेवाला छैन। यस देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन न दिने विकास र समृद्धिको बाटोमा जानन दिने यी र यस्ता विकास र सुशासनको नामका भेषधारी फिरंगिहरु प्रति सचेत र सजग रहौँ र बढ्दो गतिविधिलाई नियन्त्रण गरौँर देशको रक्षा गरौं। लेखक कानुन व्यवसायि तथा नेकपा माओवादी केन्द्र अछमका नेता पनि हुन्।
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ १५, २०७८, १०:३९:००